Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Ndị America kacha emetụta akwadoro ndị isi mgbaka iji gwọọ ọrịa uche
Nnyocha ọhụrụ nke Harris Poll mere n'aha Delic Holdings Corp. na-akọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị America na-enwe nchekasị / ịda mbà n'obi/PTSD (65%) kwenyere na a ga-eme ka ọgwụ psychedelic (ya bụ ketamine, psilocybin na MDMA) dị. nye ndị ọrịa nwere nchegbu na-eguzogide ọgwụgwọ, ịda mbà n'obi ma ọ bụ PTSD.
Dabere na nyocha ahụ, emere na ntanetị na Disemba 2021 n'etiti ndị okenye US 953 na-enwe nchekasị / ịda mbà n'obi / PTSD, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ (63%) nke ndị America jiri ọgwụ ndenye ọgwụ na-agwọ nchekasị / ịda mbà n'obi / PTSD na-ekwu na ebe ọgwụ ahụ. nyere aka, ha ka nwere mmetụta nke nchekasị, ịda mbà n'obi ma ọ bụ PTSD. Ọzọkwa, 18% na-ekwu na ọgwụ emeghị ka ọnọdụ ha dịkwuo mma / mee ka ọ ka njọ.
Matt Stang kwuru, "Anyị na-ahụ nsogbu ịgbachi nkịtị na-emetụta ndị mmadụ n'ụwa niile nke ọrịa na-aga n'ihu na-akawanye njọ, nsonaazụ nke nyocha a kwesịrị ịmanye ndị ọkachamara ahụike na ndị omebe iwu ka ha kwadoo ọmụmụ miri emi banyere uru ọgwụgwọ nke ọgwụ psychedelic," Matt Stang kwuru. ngalaba-nchoputa na CEO nke Delic. "Ezinụlọ a na-ekwe nkwa nke ọgwụ ọhụrụ nwere ike ịdị irè karịa ọgwụ ọdịnala na-enwe mmetụta dị ntakịrị, na-enye ndị mmadụ azụ azụ. Nsogbu ahụike uche nke obodo anyị ọ bụghị naanị na-emetụta ahụike ọha, kamakwa akụ na ụba - kwa afọ, ọrịa uche a na-agwọghị na-efu US ihe ruru ijeri $300 na nrụpụta efu."
Dị ka ọmụmụ si kwuo, 83% nke ndị America na-enwe nchekasị, ịda mbà n'obi ma ọ bụ PTSD ga-emeghe ịchụso ọgwụgwọ ọzọ egosipụtara na ọ dị irè karịa ọgwụ ndenye ọgwụ na-enwe mmetụta dị nta. N'ime ndị na-enwe nchekasị / ịda mbà n'obi / PTSD, ọtụtụ ga-emeghe iji ihe ndị na-esonụ bụ ndị achọpụtara dị ka ọgwụgwọ ọzọ maka ndị na-achọ ilebara ọnọdụ ahụike uche ha anya:
• Ketamine: 66% ga-emeghe ịchụso ọgwụgwọ site na iji ketamine iji gwọọ nchekasị, ịda mbà n'obi ma ọ bụ PTSD ma ọ bụrụ na egosipụtara na ọ dị irè karịa ọgwụ ndenye ọgwụ na-enwe mmetụta dị nta.
• Psilocybin: 62% kwuru na ha ga-emeghe ịchụso ọgwụgwọ site na iji psilocybin nke dọkịta depụtara iji dozie nchegbu ha, ịda mbà n'obi ma ọ bụ PTSD ma ọ bụrụ na egosipụtara na ọ dị irè karịa ọgwụ ndenye ọgwụ nwere mmetụta dị nta.
• MDMA: 56% ga-emeghe ịchụso ọgwụgwọ site na iji MDMA nke dọkịta nyere ya ka ọ gwọọ nchegbu ha, ịda mbà n'obi ma ọ bụ PTSD ma ọ bụrụ na egosipụtara na ọ dị irè karịa ọgwụ ndenye ọgwụ nwere mmetụta dị ole na ole.
Emere nyocha a n'ịntanetị n'ime United States site n'aka Harris Poll n'aha Delic site na Disemba 6 - 8, 2021 n'etiti ndị okenye 2,037 dị afọ 18 na karịa, n'etiti ndị 953 na-enwe nchekasị / ịda mbà n'obi/PTSD. Nchọpụta ọnlaịnụ a adabereghị na nlere anya nke puru omume ya mere enweghị nleba anya nke njehie nlele usoro ihe omume nwere ike gbakọọ.
Ọzọ na: United States
A na-enye onye ọrịa mbụ maka ọgwụgwọ ọkpụkpụ ọkpụkpụ United States|
Ụzọ ịgba ọsọ ugwu jikọtara ugbu a United States|
Usoro ọgwụgwọ ewepụtara na mmalite ọgwụgwọ ọrịa ara ara na-enye olileanya United States|
Ọnwụnwa ụlọọgwụ ọhụrụ maka Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer
Ebe Dr. Taleb Rifai ọhụrụ: Nnukwu ụbọchị maka Jordan ...
Isi usoro na agụmakwụkwọ na-aga n'ihu na 2022
Mweghachi nke ngalaba njem nlegharị anya ka na-aga n'ihu n'agbanyeghị...
Ọ nwere ike ịchụ nta na Windy City Net $5000?